Iqembu leCaps United Lehluleka Ukunqoba eleBulawayo City
Mpandula 06, 2017
Omunye wabadlali baxotshwe emdlalweni lo ngenxa yokudlala ngendlela engaqondanga.
Iqembu le Bulawayo City libe ngutshiki lobhanqa lele CAPS United emdlalweni weCastle Lager Premier Soccer League odlalelwe enkundleni yeHartsfield ngoLwesithathu.
Iqembu leBulawayo City yilo eliqale ukuhlohla ngehlandla lakuqala elomdlalo njalo lihlohlelwe nguIshmael Wadi kwathi iqembu leCAPS United lona lilinganise ngomzuzu wakuqala owehlandla lesibili njalo lihlohlelwe ngu John Zhuwawo.
Ekhuluma lentatheli ekupheleni komdlalo umqeqetshi weqembu leBulawayo City, uMandla Mpofu, uveze intokozo ngokuthola kwabo umklomelo owodwa kulumdlalo.
“Ngokubona kwami umdlalo uhambe kuhle njengoba ngavela ngatsho phakathi kweviki ukuba iqembu esidlala lalo akusilo iqembu elincane elilula, ukuze sithole yonke imiklomelo emithathu bekumele sisebenze gadalala. Sisebenzile gadalala njalo wonalowo owodwa umklomelo esiwutholileyo ungcono ngoba sesisiya emaphethelweni eligi njalo sekusiba nzima, okokuthi nxa udobha kungcono yikho ke ngithabe kakhulu ngomklomelo esiwutholileyo.”
Iqembu leBulawayo City linqobe ele ZPC Kariba nge 3 ka 2 emdlalweni olandelwe ngowanamhla njalo ngempelansonto lizadlala lele Black Rhinos esigodlweni.
Umsekeli kamqeqetshi weqembu le CAPS United uMark Mathe laye uthi benze kuhle kakhulu ngokuthola umklomelo owodwa.
“Umdlalo lo siwudlale kuhle njalo ubungumdlalo ongekho lula kodwa sibona ukuthi ngendlela ebesiqoqe ngayo sense kuhle lanxa uphele ungutshiki lobhanqa. Asisoli ngoba kasidliwanga njalo besisuka ekunqotshweni liqembu leDynamos yikho kuzamele sibuyele esigodlweni silungiselela umdlalo weBantu Rovers ongekho lula.”
Iqembu leCAPS United lizaphenduka njalo ko Bulawayo ukuzodlala lele Bantu Rovers emdlalweni walo olandelayo.
Kusenjalo, imidlalo iyaqhubekela phambili kusasa lapho iqembu leHwange elizadlala khona lele Bantu Rovers enkundleni ye Colliery.